DAAWO VIDEO :-Muqalas Caan ka ahaa Kenya Oo Qunsulka Safaaradeed Somalia Laga Dhigay +Sir Culus | Nabadoon Online	Monday, July 24th, 2017	Home
DAAWO VIDEO :-Muqalas Caan ka ahaa Kenya Oo Qunsulka Safaaradeed Somalia Laga Dhigay +Sir Culus Jul 12, 2017 - Aragtiyood	Qunsulka Safaaradda Soomaaliya ee Kenya Cali Maxamed Sheekh “Cali Bagadi” ayaa mar uu booqday xabsi ku yaal magaalada Nairobi ee dalka Kenya wuxuu si aan wanaagsaneyn ula hadlay maxaabiis Soomaaliyeed oo dhameysatay xabsi mudo todobo sano xukunka dhameysatay laguna celinayay Muqdisho.
Hadabba Cali Bagadi, wuxuu ku magacaaban yahay ku simaha safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, waa mas’uulka ugu sareeya ee Jamhuuriyadda FS u metelaya dalka Kenya, oo ah waddanka ay halbowlaha u ah siyaasadda iyo xiriirka dalalka daneeya Somalia oo fadhiisinkoodu yahay Nairobi.
Intii aanu xilka laga wareejin safiirkii hore Jamaal oo hadda ka tirsan golaha wasiirada, Cali Begedi wuxuu la shaqeysan jiray koox muqalisiin ah oo safaarada u qaabilsan kala iibinta Viisooyinka, sidoo kale, Cali Begedi wuxuu ahaa dilaal u suuq geeya wasiirada iyo xildhibaanada Dowladda Viisooyinka ay ka helaan safaaradaha ama u soo dhameeya shaqsiyaadka ay ergo ahaan ugu sii kaxeeynayaan.
Dadka ku dhowdhow Cali Begedi waxeey ku tilmaamaan shaqsi aqoonta aasaasiga ah ka arradan, oo aan weligii qalin iyo warqad isdul saarin, laakiin in loo magacaabo xilka qunsulka waxaa u soo dhameeyey Shariif Xassan Sheekh Aadan iyo Xildhibaan Khaalid Cumar Cali.
Dad badan ayaa isweydiinaya. “Sidee ku dhici kartaa in muqalas caan ka ah Kenya oo aan horay xil dowladeed u soo qaban inuu qunsul Soomaaliya madalaya noqdo, haddana ah kuise saffier.